MoviePass yaita zvisina maturo mu2018 iyo inenge 60% yevashandisi yakanatsa matanho avo - BGR - TELES RELAY
HOME » upfumi MoviePass yaita zvisina maturo mu2018 kuti inenge 60% yevashandisi yakanatsa matanho avo - BGR
MoviePass yaita zvisina maturo mu2018 kuti inenge 60% yevashandisi yakanatsa matanho avo - BGR
Mu 2018, bhizinesi reSinemaPass rave riri hero. Bhidhiyo yekutengesa mabhidhiyo yakaisa tani yevanyori, yakashandura zvakasiyana-siyana zvigadzirisano uye yakashandisa hurongwa hwehupfumi hwemhirizhonga mushure mezviitiko kuti zvibatsire mhirizhonga. Basa racho raifanirawo kutarisana nepepanhau raiisa kambani iri pasi pekuongororwa, uye New York Attorney General akatovhura upombwe hwekubiridzira kune kambani yemubereki webasa racho, pamutengo wakanaka.
Hazvishamisi kudzidza kuti anenge 60% yevashandisi vepa MoviePass vakanatsa kubhadhara kwavo kwe2018.
Izvi zvinoratidzwa nekutsvaga patsva kwekushandiswa kwemari kweChechi, iyo yakaongorora 400 mamiriyoni emashandisi ekutengeserana mu2018. Nhoroondo yake inoratidza, pakati pezvimwe zvinhu, kuti kuregererwa kukuru kwakaitika muzhizha. Kunyanya, munaJune naJuly, apo kuzivisa kwemashoko akaipa eShowPass yakaratidza kuti iri pamusoro wepamusoro. Yakanga iri pedyo nenguva yatakadzidza kuti AMC yakanga yatanga purogiramu yayo yekukwikwidzana, MoviePass yakanga isati yapera bhajeri kwekanguva uye yakanga isina kubvumira vashandi kutenga mabhidhiti Guru guru studio blockbusters kuburikidza ne app.
iwe uchauyeuka sechirongwa cheNetflix chemafirimu. Bhadhara purogiramu, uye iwe uchaona mafirimu akawanda mune imwe yemitambo.
Izvo zvose zvakatanga nechinangwa chakadaro. Mukuru weVideo Movie, Mitch Lowe, aimbova mutungamiriri weNetflix uye Redbox, zvichida aiva nezvinhu kuti zvibudirire. Lowe akaudza BGR makore maviri chete apfuura, chigadzirwa chemhando iyi chisarudzo chakanakisisa nokuti mamiriyoni anenge ava kuda kugamuchira zvinyorwa - "uye, nenzira, 75% vatinyore tiri mamiriyoni. "
Hazvina maturo kutaura, zvinhu zvose hazvina kushanda zvakanaka kubva ipapo.
Tichaona kana mamiriro ezvinhu achashandurwa gore rino. Pakuguma kwe2018, MoviePass yakaratidza hutatu hutatu hwematongerwo ehurongwa hwekugadzirisa hurongwa huripo. Zvirongwa zvino zvinobva pa $ 9,95 pamwedzi kusvika kumagumo ekudarika $ 24,95 kumusoro. Izvo zvikomborero zvinotyisa, kusanganisira kupa shanduko yekufambisa mafirimu pasi, pamwe nezvose zvinoitika mumitambo zvisingaiti 3D uye IMAX mafirimu. inosanganisira 3D uye IMAX mafirimu neurongwa.
Mufananidzo Wemusoro: Basa reCummings / AP / REX / Shutterstock
Cameroon: kudarika kwebhajheji kwakaparidzirwa kusvika pamutambo weCNFB FCFA pamagumo aSeptember 662
Cameroon - 2019 Budget: 237 mabhiriyoni FCFA eCentral Region
pasi rose14 137
VANHU & VANHU11 963
Vhidhiyo yakawanda2 360
Congress kuti ibviswe Donald Trump kubva kuNATO
Emmanuel Macron's tax reforms anobatsira France akapfuma
800 extras aida firimu pamusoro peCeline Dion
Vanhu: Vanopomera mhosva, Chris Brown anobuda muusungwa uye anogadzirisa zvinhu
Chisarudzo cheMutungamiri muAlgeria: apo kuziviswa kwekudaidzira kunopinda mune zvematongerwe enyika - JeuneAfrique.com